पृथ्वी नासिने हल्ला बोक्सी लागेर भैंसी मरेजस्तो – Sourya Online
पृथ्वी नासिने हल्ला बोक्सी लागेर भैंसी मरेजस्तो
सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १६ गते २३:२३ मा प्रकाशित
रविनहुड पाण्डे : ब्रेकिङ न्युज, केही प्राविधिक कारणले गर्दा सन् २०१२ मा विश्व ध्वस्त हुने तालिका स्थगित गरी २०१३ मा सारिएको छ । कृपया समन्वय गरेर जिउनुहोस्, हाँसिरहनुहोस् ।
हरिप्रसाद पोखरेल : आज मलाई पनि नेपाली समाजका भिलेन खोज्न जाम् कि झैँ लाग्याथ्यो । डिसेम्बर २१ मा संसारै ध्वस्त हुने भएसि क्यार्न खोज्न पर्‍यो र भिलेन ? विचरा भिलेनले त्यतिन्जेलसम्म भए पनि सुखले बाँच्न पाओस् ।
दीपक सापकोटा : संसार ध्वस्त हुन दुई साता बाँकी ††††† यो हल्ला कति प्रतिशत सत्य ? भूपिले उहिल्यै भनेका हुन्– यो हल्लै हल्लाको देश हो । अहिले भएका भए भूपि भन्दा हुन्– साला यो विश्व नै हल्लाखोरहरूको एउटा विश्वविद्यालय रहेछ ।
मोहन बस्याल : तपार्इंले गर्न आँटेको कुन काम बाँकी छ र ? संसार ध्वस्त हुने कुरामा चिन्ता ? बिन्दास जिन्दगी जिउनु छ अनि केको टेन्सन ? यो अतिवादी धार्मिक आडम्बरीहरूले फैलाएको कुरालाई छलफलमा ल्याउनु नै बेकार ।
आचार्य प्रमोद : डिसेम्बर २१ अगाडि नै जिन्दगीका रहर पूरा गर्ने मन छ ।
म्याग्देली गोविन्द : सन् २०१२ मा विश्व सकिने भन्या होइन, २१ डिसेम्बरमा पो हो क्या हो ?
बुटवल सहकारी संस्था लि.: अमेरिकाको नासाले अनुमान गरेको छ कि सन् २०१२ डिसेम्बर २२, २३ र २४ गते ३ दिनसम्म ब्रह्माण्डमा ठूलो बदलाब आउने भएको छ । पृथ्वीमा तीन दिन सम्म पूरै अँध्यारो रहनेछ । यो बेला सौर्य मन्डलका सबै ग्रह एउटै समानान्तर रेखामा रहनेछन् । यसले पृथ्वीमा धेरै ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आएर ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ । त्यसपछि यो संसार पूरै बदलिने भएको छ र हाम्रो पृथ्वी अर्कै ठाउँमा सर्ने छ । त्यसैले ती दिनमा परिवारबाट टाढा नहुनुहुन अनुरोध छ । संसारले नयाँ जीवन पाउनेछ । तर, यो पृथ्वीको अन्त्य भने होइन । रूप मात्र बदलिने हो । सबै जना राम्रोसँग बस्नुहोला ।
लेखनाथ ढकाल : पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भनेर किन डराउने ? प्रकृतिमा कुनै कुरा एक्कासी आइपर्दैन । सबै घटना निश्चित समयका नियमबद्ध शृंखलाबाट घट्ने गर्दछन् । सबै कुराको बोधगम्यता भइनसकेको भए पनि धेरै कुराका बारेमा मानिसले जानकारी हासिल गर्ने क्षमताको विकास गरिसकेको छ । डिसेम्बर २१ मा पात्रो, तिथि, मिति र अन्य पुराना ज्योतिष फर्मुलामा केही अनौठो संयोग मिलेका कारणले त्यो दिन पृथ्वीकै आयु सकिएको निष्कर्ष निकाल्ने कुरा भनेको तल्ला घरकी आइमाईले बोक्सी लागेर मेरो भंैसी मर्‍यो भनेजस्तै हो ।
वैकुण्ठराज पराजुली : हिजो मेरो एक जना साथीले बाहिरी जिल्लाबाट केटी भगाएर काठमाडौं ल्याएछ मलाई फोन गर्‍यो, अनि मैले यति छिटो हतार किन गरिस् केटो, भनि सोधेको त डिसेम्बर २१ मा मर्नु नै छ, आठ/दश दिन भए पनि दुवै जना सँगै भइन्छ, त्यसैले पो भन्छ त † अनि राम्ररी बधाई दिएँ मैले पनि…।
मगर कवि : उफ् π दिन बिताउन साह्रै गाह्रो । म त २१ डिसेम्बरलाई भव्य रूपमा स्वागत गर्नेवाला छु ।
अर्जुनमणि पौडेल : प्लिज विश्व समाप्त हुने अनावश्यक हल्ला बन्द गरेर वैज्ञानिक कारण बुझौँ ।